Tumsa Duulaa Waraanaa Itophiyaa fi Keenyaan yaadamaa jiru ilaalchisee Ibsa ABO - Adda Bilisummaa Oromoo | Adda Bilisummaa Oromoo
Home » Oduu » Tarkaanfii WBO » Tumsa Duulaa Waraanaa Itophiyaa fi Keenyaan yaadamaa jiru ilaalchisee Ibsa ABO
Mootummaan Wayyaanee/IHADEGs kanneen isa duraa irraa adda hin taane. Waggoota aangoo irra ture guutuu alagaa of gargaarsisuun jiraate. Gargaarsa maallaqaa, meeshaa fi leenjii waraanaa, tumsa diplomasii mootummoota alagaa irraa argateen ummatoota ukkaamsuun bituu danda’e. Akka mormii fi balaaleffannaa ummatootaan waggoota kurnoota lamaa oliin lakkaa’amaniif hafnaan aangoo iyyuu dhuunfatuu kan hin dandeenye tahuu kanneen haqa biyyattii keessatti mul’ataa turee fi jiru beekan bareechanii beeku.
Mootummaan Wayyaanee biyyoota ollaa Itophiyaa hawwatuun Qabsoo bilisummaa fi dimokraasii ummatootaa ukkaamsuu irratti kanneen of gargaarsisaa jiru keessaa mootummaan Keenyaa isa tokko. Mootummaa Keenyaa firoomfatuu, humna tikaa fi poolisaa bitatuun kanneen isa morman, Keenyaatti baqatan qabanii akka kennaniif taasisuun dhabamsiisaa akka ture dhokataa miti. Addatti ammoo ilmaan Oromoo beektotaa fi Qaroo, akkasumas maanguddoo Oromoo qabanii dabarsanii kennuu fi ukkaamsanii dhabamsiisuun dalagaa mootummaa Keenyaa tahee jira.
Fincila ummatni Oromoo Oromiyaa keessatti finiinsaa jiruun kan baarage mootummaan Wayyaanee yeroo ammaa hariiroo mootummaa Keenyaa haaromsuun akka duula ummata Oromoo irratti geggeessaa jiru gargaaruuf guuza waammatuu irratti argama. Hundeen akeeka Wayyaanee kanaas WnBO fincila ummata Oromoo finiinaa jiru keessatti gahee isaa akka hin gumaachineef duraa fi duubaan lola itti banuun gufachiisuu kan galii godhate dha.
ABOn gochaa ilmaan Oromoo irratti poolisootaa fi humna tikaa Keenyaan raawwatamu balaaleffatuun mootummaan gochaa farra namoomaa fi mirga baqattootaa hin kabajne kana akka dhaabu gaafataa fi akeekkachiisaa akka ture ni yaadatama. ABOn alattis dhaabbattootni mirga namoomaaf falman kanneen akka amnesty International, Human rights watch, akkasumas, dhaabbatni Baqqattoota Addunyaa(UNHCR) mootummaan keenyaa gochaa namoomaan alaa baqattootaa fi lammiilee Oromoo irratti raawwatu akka dhaabuuf gaafataa turan. Haa tahu malee gochaan farrummaa kun guutummaatti hin dhaabamiin jira.
Yeroo ammaa kana ammo mootummaan Wayyaanee duula WBO irratti baneef mootummaa Keenyaa gargaarsifatuuf sossobatuu irratti argama. Waltahiinsi Keenyaa fi Itophiyaatti Moyyaaleetti prezedantii Keenyaa fi Muummicha Ministeraa Wayyaaneen irra gahame Qabsoo Bilisummaa Ummata Ormoo biyya keessaa finiinaa jiru dhaamsuuf kan akeekkate dha. Mootummaan Wayyaanee sochii barattootaa fi ummata Oromoo kana irraa gargaarsa dabalataa ala irraa barbaaddatuun dirqii itti tahe. Kanaanis Qabsoo ummata Oromoo marsama keessa galchuun ukkaamsuutu yaadame.
Sossobbii Wayyaanee kana fudhatuun tumsa mootummaan Wayyaanee gaafatuuf dirmatuun yakka qabsoo bilisummaa irratti raawwatamu tahuu ABO dursee hubachiisuu fedha. Mootummaan Keenyaa waamicha Wayyaaneef dirmatee ilmaan Oromoo itti baqatan, mirga baqatummaa fi namoomaa qaban dhiituun, seera addunyaa cabsuutti dabalee gochaa farra namoomaa tahuu ABO irra deebi’ee hubachiisa. Kana malees karoora duulaa Wayyaaneen baafate keessatti qooda fudhatuu dhaan WBO irratti duuluu irraa akka of qusatu ABO gaafata. Kana waliin ABOn mootummaan Keenyaa dhimma Oromoo fi Wayyaanee gidduu harka akka hin seensifne akeekkachiisa. Dalagaa kanaan dura baqattoota ilmaan Oromoo irratti raawwatame yaadachiisaa Wayyaanee bifa kamiinuu dhimma Oromoo irratti gargaaruu akka dhaabu, kana dhaga’uu dhabuun tarkaanfii fudhatuun badii gahuu fi gaaga’ama dhaqqabuuf kan itti gaafatamu tahuu beeksisa.
Kana waliin ummatni Oromoo biyya keessaa fi ala jiraatu shira eenyummaa isaa dhabamsiisuuf aggaamamaa jiru tokkummaa fi jabinaan akka dura dhaabbatu ABOn dhaama. Ilmaan Oromoo waraana Itophiyaa fi Keenyaa keessa jiranis, shira ummatni Oromoo akka sabaattis tahe akka dhuunfaatti hin jiraanneef irratti xaxamaa jiru mormuun ummata isaanii waliin akka hiriiran waamicha godhaaf. Kana malees ummatni Keenyaa, ootummaan Keenyaa wal dhabbii ummata Oromoo fi mootummaa gabroofataa gidduu jiru keessaa akka bahu dhiibbaa barbaachisu akka godhu ABO gaafata.
Muddee 9, 2015